बहुमतीय प्रधानमन्त्रीको प्रक्रिया सुरु : प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा एमाले मौन !
ARCHIVE, NEWSPAPER » बहुमतीय प्रधानमन्त्रीको प्रक्रिया सुरु : प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा एमाले मौन !
काठमाडौं – प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतीय सरकार गठनका लागि संसद्लाई आह्वान गर्नुभएको छ । सहमतीय सरकारका लागि दिएको सात दिनको समयभित्र दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीवार बहुमतीय सरकारका लागि आह्वान गर्नुभएको हो । संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) बमोजिम सहमतीय सरकार गठन नभए सोही धाराको उपधारा (३) मा बहुमतीय सरकार गठनको व्यवस्था छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।